अपहरण गरि कैदी बनाएर केटि बनाएका सुरेन्द्रकाे भविष्य डामाडाेल ! दोषीलाई हुनेछ यस्तो कारबाही - DerbyKhabar
अपहरण गरि कैदी बनाएर केटि बनाएका सुरेन्द्रकाे भविष्य डामाडाेल ! दोषीलाई हुनेछ यस्तो कारबाही
काठमान्डौ , चार वर्षअघि भारत पुगेका कञ्चनपुरका कृष्णपुर नगरपालिका–१ दोमिल्लाका एक युवकको भविष्य डामाडाेल भएकाे छ । भारतमा तेस्रो लिङ्गीहरूले पैसा कमाउनका लागि २३ वर्षीय सुरेन्द्र सिंह मालको भविष्य डामाडाेल पारिदिएका हुन् । ०७२ सालमा १२ कक्षाकाे परीक्षा दिएर पढाइ खर्चको जोहो गर्न भारत गएका उनकाे पढाइसँगै भविष्य नै डामाडाेल भएकाे हाे।भारतमा हुँदा तेस्रोलिङ्गी गिरोहले लिङ्ग नै काटिदिएपछि जिवन नै बर्बाद भएकाे सुरेन्द्रले बताए। गि राेहले उनलाई महिला बनाएर कमाउने धन्दामा प्रयोग गरेका थिए ।
उनले भने, ‘लिङ्ग काटिदिए, महिला बनाएर महिलाकै जस्तो काम गराए ।’ दिल्लीभन्दा करिब ५० किलोमिटर टाढाकाे मेरिट भन्ने शहरका नइम खानले मालकाे लिङ्ग काटेर प्रयोग गरेका थिए । महिला भएपछि उनी लाजले घर आउन सकेका थिएनन् । तर , उनलाई त्यहाँ समस्या भएपछि ०७६ वैशाखको विशु पर्वका लागि गत वर्ष चैत अन्तिम साता नेपाल आएका थिए । सुरूमा महिलाकाे भेषमा नेपाल आउँदा कसैले सुरेश भनेर पत्याएका थिएनन् । अन्तमा उनको निधारमा भएकाे घाउ र स्वरबाट परिवारले चिनेका थिए ।
रोचन कुरा के छ, भने लिङ्ग काटेर तेस्रोलिङ्गी बनाइदिने रिजमान खानका छोरा सुहिलले माललाई प्रेम गर्न थालेका छन् । सुहिलसँगै नेपाल आएका मालको विषयमा आफन्तले चासो राख्न थालेपछि उनीमाथि अन्याय भएको थाहा पाएकाे हाे । अङ्गभङ्ग बेच बिखन गरेको भन्दै मालको परिवारले खानलाई कारबाहीको माग राखेपछिको केटालाई केटी बनाएको तथ्य खुलेको हो ।मालका परिवारले प्रहरीमा निवेदन दिएसँगै खानलाई लिन आएका दुईसहित तीन जना भारतीय नागरिक इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीको नियन्त्रणमा छन् । प्रहरी निरीक्षक रमेश अवस्थीले मालका परिवारले लिङ्ग काटेको र लिङ्ग काट्ने उपर कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग राखेकाे जानकारी दिए ।
उनले घटनाका विषयमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार जाने भएकाले सरकारी वकिलसँग छलफल भइरहेको बताए । माल परिवारले छोराको भविष्य बिगार्नेविरूद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेकाे छ । मुलुक अपराध संहिता २०७४ को दफा ५२ अनुसार अङ्गभङ्ग गरेमा वा पुरुषलाई पुरुषत्वहिन गरेमा १० वर्ष कैद र एक लाख जरिवानाको व्यवस्था रहेकाे छ ।मालका बाबु जयराजले छोराको भविष्य नै डामाडोल पारिदिएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरे । ‘हेर्नुहोस् छोरालाई छोरी नै बनाइदिएको भए हुन्थो, अहिले त न छोरा, न छोरी भयाे,’ उनले भने, ‘कसरी के गर्नु, घरमा रात दिन यसकी आमा रोइकराइ गर्छिन् । उसलाई सम्झाउने कि, छाेरालाई हेर्ने ?’